Mgbe ezinulo m anaghi anabata onye nkem | Bezzia
Valeria Sabater | | Psychology na di na nwunye, Mmekọrịta
Ọ dịghị mkpa ịgafere oge uto iji zere nsogbu ndị mara mma nke ndị mụrụ anyị. O nwere ike ịbụ na ihe karịrị otu ugboro ka gị na ndị ezinụlọ gị sere okwu mgbe ị kọwaara ha onye ị chọrọ ịlụ. Na mmekọrịta ezinụlọ Ha na-anọgide na-enwe ọtụtụ ibu na ọnọdụ nke di na nwunye ahụ ruo taa. Esemokwu, nghọtahie ma ọ bụdị enweghị nkwenye n'akụkụ nke ndị mụrụ anyị tupu ụdị ndị enyi anyị na-ahọkarị, na-emetụta anyị mgbe niile n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Na dabere na njirimara gị, ọ nwere ike iduga nnukwu enweghị obi ụtọ na mmekọrịta gị.
Ezinụlọ anyị bụ nke mbụ mmekọrịta mmekọrịta ebe anyị tolitere na ebe anyị na-eguzobe nkekọ mbụ anyị. Nke mbu mgbakwunye mmekọrịta. Nke nta nke nta ka ọnọdụ a bụrụ nke sara mbara, gụnyere ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ndị enyi, na di na nwunye mbụ. Mkpakọrịta anyị na-agbanwe ma anyị na-eto dị ka ndị mmadụ. Mana enwere oge mgbe ọnọdụ mbụ anyị, ezinụlọ, na-aga n'ihu na-ebu ibu dị ukwuu na ọbụlagodi ikike dị elu, nke mere na ọ na-esiri anyị ike mmekọrịta mmekọrịta anyị na nke mmụọ. Gịnị ka anyị ga-eme? Olee otú anyị pụrụ isi merie ọnọdụ a?
1 Kpachara anya maka ezinụlọ ndị na-egbu egbu
1.0.1 Ezigbo ezinụlọ Olee otu esi amata ya?
2 Debe oke ma nweta nkwekọrịta ezinụlọ
Kpachara anya maka ezinụlọ ndị na-egbu egbu
Nke mbu anyi kwesiri ighota otu ihe. Ọrụ nna ma ọ bụ nne adịghị mfe. Agụmakwụkwọ nke ndị nne na nna maka ụmụ ha esiteghị naanị n'inye usoro ihe ọmụma na ụkpụrụ nduzi dị mkpa. Ndị mụrụ anyị ga-ebunye anyị anyị nche, ntụkwasị obi, obodo kwụụrụ na ntozu oke nke mere na anyị onwe anyị nwere ike iji aka anyị mee mkpebi nke anyị iji mụta ibi ndụ zuru oke ma nwee obi ụtọ.
Ozugbo anyị gabigara oge uto, ọrụ gị kwesịrị ịbụ nke ụdị ahụ nkwado na nduzi Onye anyi puru ichighari Ma, dị ka ndị okenye, anyị nwere ikike ime nhọrọ nke aka anyị, mejọrọ nke anyị, ma mụta site na ndụ anyị na nnwere onwe zuru oke. Ma oburu na taata, mgbe anyi tozuru oke, echiche na ntuzi aka nke ezi na ulo anyi gara n’ihu n’enwe mmetuta anyi n’onu ogugu, mgbe ahu anyi aghaghi ima banyere nke a ma guzobe oke nke oma. Maka nke a, ọ dị mkpa ka anyị mụta ịmata njirimara nke ezinụlọ "na-egbu egbu", ndị na-egbochi anyị ịkwado onwe anyị na nhọrọ na ọchịchọ anyị:
Ezigbo ezinụlọ Olee otu esi amata ya?
Dị nnọọ ka e nwere ndị mmekọ na ndị enyi na-egbu egbu, ezinụlọ anyị nwekwara ike ịdị nsị. Anyị aghaghị ịmụta ịmata ya. Ọ bụ eziokwu na ọ ga-abụ ihe dị mgbagwoju anya. N'okwu a, nne na nna abụọ a nwere ike rụọ ọrụ otu ọrụ, ihe ọmụmụ agụmakwụkwọ nke anyị toro na nke anyị na-amaghị maka mmetụta ya ruo mgbe ha ruru ogo. Ka anyị hụ njirimara kacha mkpa.
Ihe omumu akwukwo nke overprotection nke ụmụ.
Nkwado nke ndị nne na nna na ụmụaka na-etolite, ebe enwere ohere dị ole na ole nnwere onwe.
Omume anyị, ma ọ bụ omume anyị, ga-abụ ihe kpatara ndị nne na nna anyị obi ụtọ ma ọ bụ enweghị obi ụtọ. Otu ihe atụ ga-abụ ọnọdụ nke ịnweta ohere ọrụ na mpaghara ọzọ ma ọ bụ mba ọzọ. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ịhapụ, ha ga-ewere ya dị ka mmejọ, dị ka ihe ịrịba ama na anyị chọrọ imejọ ha ma hapụ ha naanị.
Ihe mmetụta uche.
Site n'inye ohere ole na ole maka ịchị onwe ha, nhọrọ ọ bụla anyị mere ga-abụ ihe nzuzu.
Mmekọrịta ọ bụla na-emebi oke emechi banyere onye na-achịkwa ma na-achịkwa. Ọ bụ ya mere na a ga-ahụ onye ọ bụla nke na-anwa ịbịaru oghere "nzuzo" ahụ dị ka ihe iyi egwu. N'ihi ya, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị nne na nna "na-egbu egbu" anaghị enwe mmasị na di na nwunye ọ bụla anyị webatara.
Debe oke ma nweta nkwekọrịta ezinụlọ
Anyị maara, ọ dịghị mfe. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ ndị mụrụ gị na-na-enwe nghọtahie na-aga n'ihu n'ihi ndị di na nwunye ị na-akpọlata, ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahụta echiche nke imeziwanye ọnọdụ a. Ma enwere. Ọ bụ eziokwu na ezinụlọ anyị nwere ikike ọ bụla ịghara ile onye ahụ anyị hụrụ n'anya anya ọma. Ma ị ga-asọpụrụ ya. Anyị ga-anabata ndụmọdụ na nkọwa gị, mana anyị ga-enwe okwu ikpeazụ na mkpebi nke aka anyị. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịkọwa nke ọma gbasara akụkụ ndị a:
Nkwenye na ntukwasi obi nke onwe. Anyị niile bụ nna ukwu nke ọchịchọ na mkpebi nke aka anyị. Ezinụlọ anyị nwere ike iduzi anyị ma nwee ọnụ n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ anyị, dịka ndị nne na nna anyị ga-ege ha ntị. Mana anyị bụ ndị ga - eme mkpebi ikpeazụ, na - ekwu nwayọ ma jiri nwayọ kwuo ihe anyị chọrọ ime, na ihe anyị ga - eme. Anyị nwere onwe anyị ịhọrọ ndị anyị na ha ga - akpakọrịta, nweere onwe anyị imejọ nke anyị ma ọ bụ iji nweta ihe obi ụtọ zuru ezu. Mata oke nke ihe ezinụlọ anyị chọrọ na ihe dị anyị mkpa na ihe anyị chọrọ, ga-abụ ihe mbụ a ga-eme iji hụ ihe nke ọma.
Nweta nkwekọrịta. Nzute mbụ ahụ gị na ndị mụrụ gị zutere nwere ike ọ gaghị akara gị mma. Ezinụlọ gị nwere ike ghara ịnakwere ya n'ihi ihe ọ bụla kpatara ya. Ma kwa ụbọchị, ha agaghị enwe ihe ọzọ ha ga-eme nabata ya. Ọ bụrụ na anyị ejiri nwayọ na ntụkwasị obi were ọnọdụ anyị, nke iso onye anyị hụrụ n'anya n'agbanyeghị ihe ekwuru, ha agaghị enwe nhọrọ ọzọ ma ọ bụghị iwere ya. Mmekọrịta ga-ewe oge ịbịa. Ma a na-egosipụta ya site n'omume. Na obi ike na ịtọ oke. «Amaara m ebe obi ụtọ m dị, ọ bụrụ na ị nabata ya, mgbe ahụ anyị niile ga-enwe obi ụtọ». Site na mbọ na mkpebisi ike anyị ga-enweta ya.
Ezinụlọ anyị dị mkpa dị ka onye anyị na ya bi, anyị maara nke ahụ. Ma mgbe ụfọdụ, a na-ewu mgbidi n’ebe ọ na-esiri nghọta na nghọta ike. nghọta n'etiti ndị ọzọ. Igosiputa onodu ayi na obi uto nke onye ayi hoputara kwesiri ime ka enwe ohere iji biaru ya nso ma obu mee. Bụ onye toro eto na-agụnye ịme mkpebi, ihe ndị kachasị mma bụ ndị metụtara ọdịmma nke anyị. Ọ bụrụ na ndị ezinụlọ anyị anaghị aghọta gị ma ọ bụ na-asọpụrụ gị na mbụ, ha nwere ike ịchọ obere oge. Ma ha ga-emesị mee ya, obi abụọ adịghị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Mgbe ezinulo m anabataghi onye ibe m
Ihe 24 kwuru, hapụ nke gị
Hola buenos días(: mis padres me adoptaron hace como 5 años tengo una relación de confianza y armonía con mi papa pero no con mi mama como que ella nunca estuvo de acuerdo con ella la relación es de respeto y es todo bueno ellos me conocen desde que yo estaba chiquita tenía 3 años pero el proceso de adopción fue muy largo yo tengo novio mi papa cuando se entero que andábamos a escondidas se molesto mucho no quiere saber nada de el pero el ya lo conocía sabe que es un chico bueno venia a la casa pero como amigo el me ayudaba en las clases de matemáticas en verdad el me hace muy feliz pero mi papa esta aferrado que no nos podemos volver a ver que quiere mas tiempo para disfrutarme después de todo el tiempo que pase sin ellos y yo lo entiendo pero yo nunca cambie con mi papa cuando tenía novio es un cariño diferente el en verdad me hace feliz pero mi papa piensa que tengo que terminar mi carrera para poder tener novio y yo pienso que la vida es parte de eso tengo 21 años y mi papa me trata y ve como una bebe yo lo entiendo y me gusta que me consienta es solo que ya no soy la niña que era antes tome la decisión de estar con el a escondidas por que sabia que mi papa nunca lo iba a aceptar íbamos a todos lados juntos todo el día estábamos juntos claro como amigos ante los ojos de mi papa pero mi papa me dice por que no me dijiste y yo si te hubiera dicho hubieras estado todo el tiempo pendiente llamándome y así yo quise tomar esa decisión de ser feliz por unos meses y no me arrepiento por que por primera vez fui feliz completamente me siento mal por mi papa que dice que no me conoce y es cierto la gente crece el es un muchacho bueno yo vivo aquí en Estados Unidos vivía en México en un intentando el es de Perú tiene 24 años tiene una carrera pero no aquí en Estados Unidos su sueño es hace r una carreras aquí pero mi papa quiere que yo este con alguien que sepa como es la vida aquí que hable ingles que este estudiando aquí pero yo pienso que eso no es justo solo por ser de otro país creo que es mejor así por que los dos vamos creciendo juntos conociendo nuevas culturas a tener alguien que ya lo sabe todo y depender de el no voy a aprender a descubrir nada por que el ya lo sabe todo mis papas están aferrados que primero la carrera después el novio pero el me ayuda en la escuela es un chico respetuoso me hace feliz mis papas lo querían por que es un chico bueno humilde sencillo pero cuando se enteraron de eso mi papa lo vio como una traicion el le fue a pedir disculpas por el momento el no esta aquí en Estados Unidos regreso a Perú para terminar su tesis y juntar dinero yo lo único que quiero es volver a ser feliz mi papa dice que ya no lo voy a volver a ver y eso me duele muchísimo por que yo ya no quiero discutir la relación entre familia hace meses que no esta bien y yo tampoco estoy bien mi papa me quita el celular quiere saber todo me dice como vas a saber mas tu que yo me tiene que dejar vivir disfrutar la vida pasa y nos amamos muchísimo yo no quiero estar peliada con mi papa no se que hacer?
Enwere m ike ịsị na n'ọnọdụ m nke a na-eme, ezinụlọ m anabataghị enyi m nwoke, anyị nọrọ ebe ahụ ọnwa 9 ma nsogbu ya bụ na ọ na-ese anwụrụ mmanya na ahụghị m nsogbu ọ bụla, Achọrọ m ka m nwee obi ụtọ na ya ma mee ka m nwee obi ụtọ n'ihi na anyị na-aghọta ibe anyị nke ukwuu N'akụkụ niile ya mere ọ na-ewute m na m na-ekpe ya ikpe ma ọ bụ na-ekpebi echiche ya ma ha achọghị ịnọgide na-akwado m na ọmụmụ ihe mahadum, ha gwara m na ọ bụ ọmụmụ ihe ma ọ bụ enyi ya nwoke, nke bu eziokwu bu, echere m na obu ihe di iche.Ọ bụ ezigbo nwa nwoke.M chọrọ naanị udo nke uche ... oge niile.
ezigbo ederede, a na m agabiga ọnọdụ nke ndị m kwenyere na n'ihi ọtụtụ nsogbu mụ na onye ọlụlụ m, ọnọdụ ahụ mere na ezinụlọ m anabataghị ya. Adị m afọ iri abụọ na asaa ma echere m na eruola m ịnakwere mmejọ m na ịhọrọ ihe m chọrọ maka ndụ m. Ana m arụ ọrụ, anọ m onwe m ọbụlagodi na m bi n'ụlọ nne na nna m mgbe m kewasịrị, mana anyị ka na-anọkọ site n'oge ruo n'oge, mụ na onye òtù ọlụlụ m na-ezukọ na nzuzo iji gbalịa ọzọ mgbe mmiri ahụ dajụrụ ma anyị dozie ihe nkiri anyị. Anyị hụrụ ibe anyị n'anya ma ọ bụrụ na ezinụlọ m nyere m nhọrọ ma ọ bụ were iwe banyere mkpebi m ịlaghachi, echere m na ha agaghị enwe ike ịghọta na mkpebi nke ndụ mmadụ adịghị dabere na ndụmọdụ ezinụlọ, yana nsogbu mmekọrịta ahụ na mkpebi ndị m na-eme dabere n’ihe m chere na ọ dị m ka mụ na onye òtù ọlụlụ m bi, apụtaghị na ahụghị m ezinụlọ m n’anya. Ikekwe ka oge na-aga, anyị ga-enweta nkwekọrita achọrọ m. ọ bụ ezie na ọ bụ ọrụ siri ike ma dị nwayọ. Ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị na ezinụlọ gị hụrụ gị n'anya, enwere ike ịme ya.
Luna nye m ihe yiri nke a na-eme m, mana anaghị m ahụ ya na nzuzo, naanị m hụrụ na m ga-ahapụrịrị ya n'ihi na ha nọ n'ọnọdụ, ọ bụ nke m, ọ bụ nne nne m…. Gịnị ka o mere ka ọ debe ya?
Ma ọ bụrụ na ọ bụ n’ihi ihe ụfọdụ onye anyị na ya na-emejọ n’ọdịnihu, nne na nna anyị ga-anọ ebe ahụ ịgwa anyị “Agwara m gị ya” ...
Dịka m na-eme nne nne m na ọ hụghị onye ọlụlụ ya n'anya n'ihi na nwanne mama m enweghị mmasị na ya, ọ na-achịkwa ya
Ndewo, chi ọbụbọ, a na m emekwa otu ihe mana ya na nwanne mama m achọghị ka mụ na enyi m nwoke hụ m n'ihi na ị hụghị m n'anya mana ọ na-eme ihe niile enwere ike ịhụ m na achọghịzi m izu ike a M na-eme nke a ka nsogbu a dị mma onye ọlụlụ m na m hụrụ ibe anyị n'anya ọtụtụ ihe dị ka gara aga iji nwee enyi nwanyị m n'udo?
afọ ọhụrụ dijo
Ndewo nne m bụ nwanyị siri ike ma ọ chọghị ịnabata enyi m nwoke n'ihi na m hapụrụ ụlọ akwụkwọ m wee gakwuru ya na ọ masịghị nke ahụ wee gwa m na ọ ga-agwụ ya ma emeghị m ya n'ihi na m hu ya n'anya nke ukwuu uffff a otutu
Zaghachi yerlis de silva
Ndewo, otu ihe ahụ na-eme m. Anyị na enyi m nwoke nwere mkparịta ụka na nna m gụrụ ya. Site n'ebe ahụ ha kpọrọ ya asị, anyị na-amịpụ ma ọ jọgburu onwe ya n'ihi na anyị enweghị ike inwe mmekọrịta dị mma, enwere m mwute nke ukwuu na amaghị m ihe m ga - eme
Mụ na ndị mụrụ m biri ruo mgbe m gbara afọ iri abụọ na asatọ, mgbe m dị afọ iri atọ, m lụrụ nwanyị wee nwee nwa nwanyị ma ruo taa ha anaghị anabata nwunye m. Ha na-ata m ahụhụ na-anụbeghịkwa ya n'ime afọ abụọ. Emefu eze New Afọ na Christmas na ụlọ nke nwunye m ezinụlọ. Mụ na ndị mụrụ m ruo mgbe m gbara afọ 28, ọ dị ezigbo mma, mana mgbe m lụrụ di na nwunye, nsogbu bịara wee dị njọ. Ndụmọdụ ọ bụla.
Adị m 28 afọ, m na-arụ ọrụ, m bi naanị m. Ndị mụrụ m kpọrọ enyi m nwoke asị, ha emeela ihe niile ha nwere ike ime ka ọ kwụsị, ha akwụsịla ịgwa m okwu, na-akparịkwa ya, na-achọkwa iji ihe ọ bụla megharịa m anya. Ha achọghị ịghọta na m na-eme mkpebi.
Ike gwụrụ dijo
Ndewo, ehihie ọma. My ikpe bụ dịtụ gwụ .. M lụrụ 8 afọ na ụmụ abụọ. Mmekọrịta m kwụsịrị ma m gbara alụkwaghịm n'ihi enweghị nlebara anya na anyị leghaara anya. Ezutere m onye ọ bụ ugbu a onye ibe m. Site na oge efu ha achọghị ịma ma ọ bụ hụ ihe ọ bụla. Ndị mụrụ m ji okpukpe kpọrọ ihe ma ha anabataghị ịgba alụkwaghịm na ụmụ ha abụọ, ma ya fọdụ ịhapụ onye nke ọzọ. Mgbe m gbara alụkwaghịm, m gara biri na nke ndị mụrụ m, ọ na-ewute m nke ukwuu nke na m ga-eso onye ibe m na ụmụ m biri. Childrenmụ m ewere ya dị ukwuu kemgbe ha dị obere ma ha anabata ya mana isiokwu bụ ha. Ahụghị m ụzọ ọ bụla m nwere ike isi mee ka ndụ m dị mma. Ike gwụrụ m nke ukwuu n’ihi na ụmụnne m nọnyeere ha. Ha etinyela m n'akụkụ achọghịkwa ịma ihe ọ bụla gbasara ndụ m ka mụ na ya na-aga n'ihu ... Ọ ga-amasị m ịhụ echiche ndị ọzọ. Daalụ
Zaghachi Na Ike Gwụrụ
Mụ onwe m nọ n'otu ọnọdụ mana mụ na nwanne m nwoke nke okenye
Adị m afọ 20 ma mụ na onye òtù ọlụlụ m nọ na mmekọrịta maka afọ 2 (n 'ebe dị anya) na nsogbu nke mmekọrịta ahụ bụ nwanne m nwoke, ọ chọghị ka m nabata enyi m nwoke n'ihi ọgwụ ọjọọ ya n'oge gara aga
ma ọ hapụworị ha ugbu a ọ na-arụ ọrụ awa 12 kwa ụbọchị
na onye ozo m na-egbochi ịgwa nwanne m nwoke banyere anyị mana m na-atụ ụjọ na nwanne m nwoke
Ọ ga-amalite ikwu ihe ọjọọ banyere ya ọzọ ma ọ gaghị eziga m United States maka nke ahụ.
yasonis Delgado ezinụlọ dijo
ndewo aha m bụ yasonis, adị m 20 afọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 21 ka m na ndị mụrụ m dị ndụ ma ha anaghị ekwe ka m nwee ụmụ nwoke. Nne na nna m bụ ndị nne na nna kacha mma n'ụwa, mana ọ nweghị ihe bụ ntụkwasị obi nke ndị nne na nna na ụmụaka, ndị mụrụ m agwabeghị m maka ya obere ihe m maara n'ihi na anụre m ya n'ụlọ akwụkwọ ma anụla m ka ndị enyi m na-ekwu maka ya na
Enwere m ịhụnanya n'ebe nwa nwoke nọ m hụrụ ya n'anya Ama m na ọ hụrụ m n'anya achọghị m ida ya, mana amaghị m etu esi agakwuru ndị mụrụ m ka m gwa ya okwu ma kọwaa na m nwere ịhụnanya na m abụrụla m nwa agbọghọ, na abụ m nwa agbọghọ tozuru oke ibi ndụ dị ka nke ụmụ agbọghọ niile nke ọgbọ m na-ebi.
Zaghachi yasonis familia Delgado
Ndewo, nnenne anaghi anabata enyi m nwoke maka na o na a drinksu mmanya ma na-akpa agwa ọjọọ, achoro m ime ka mama m ghota na ibu enyi ya nwanyi, o nwere ike igbanwe n’ihi na o hururu m n’anya ma hu m ya n’anya ma onweghi aghota ya, o kwuru ọ bụ naanị imebi m mana nke ahụ adịghị otu ahụ… .. HELP… .. Amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụ otu esi agwa ya
Ndewo, ihe m mere bụ na mụ na enyi m nwoke ebiela afọ asaa. Ọ dị afọ 7 ma adị m afọ 59. Ezinaụlọ ahụ tinyere nne na ụmụnne m ndị nwanyị ahụbeghi m anya. Kemgbe m bidoro katọwa m. M ghọtara ya site na mbido. Onwa abuo gara aga enyochare m n'ihi na, n'ihi akara aka, ọ hapuru ekwentị m oghe wee lelee ya ma ahụrụ m ihe niile nwanne nwanyị ahụ kwuru megide m. Agakwuuru m ya, ọ gwara m na m ga-ezochi ya maka na anaghị m achọ nsogbu. O kwuru na nne ahụ emeela agadi (ọ dị afọ iri asatọ na atọ) nakwa na ị ga-aghọta ya. N’aka nke ọzọ, ụmụnne nwanyị ahụ na-emere di ha anyaụfụ. Amaghị m ihe m ga-eme. Ke ofụri ofụri, ọ bụ ara. A chọrọ m enyemaka. Ana m arịa ọrịa nke ibi ụdị ndụ a.
Ndewo m na-achọsi ike m chọrọ enyemaka m na-eche na anwụrụ m, enwere m olileanya na mmadụ ga-enyere m aka
Eziokwu bụ na enwere m mmekọrịta nke afọ 3
M zutere onye mụ na ya nọ na Facebook 4 afọ gara aga anyị abụọ sitere na steeti dị iche iche mana si n'otu obodo
Anyị emeela mkpebi ịlụ di na nwunye, anyị bikọ ọnụ ruo ogologo oge n’onwe anyị, anyị maara onwe anyị nke ọma, ọbụna ndị mụrụ anyị amaraworị ibe ha.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị mụrụ m enweghị mmasị na onye ọlụlụ m, ha anaghị anabata ya ma aghọtaghị m ihe kpatara ya, echere m na ọ bụ ihe ịchọrọ ma ha ga-anabata ma oge ọ bụla ọ na-akawanye njọ.
Ọlụlụ m bụ ezigbo mmadụ, ọ bụ onye ọrụ, ọ na-eme m obi anụrị, anyị hụrụ onwe anyị n’anya na ọ bụ ya mere na anaghị m aghọta nlelị nke ndị mụrụ m dịka ha si kwuo n’ihi na o si steeti ọzọ ma ha achọghị m ịhapụ.
Emeela m ka o doo m anya na agaghị m ala, ebe onye chọrọ ịlụ m ga-akwaga n’obodo m
N'agbanyeghị nke ahụ, ndị mụrụ m machibidoro m iwu ịnọnyere ya, ha anarala m ego, ihe niile iji gbochie m ịhụ ya
Adị m afọ 20, na-eru nso 21
Enwere m ọrụ kwụsiri ike ọ nwere ọrụ siri ike
Ha na-aga n'ihu na-emeso m dị ka nwatakịrị, ha na-eyi egwu igbu onye ọlụlụ m na ha achọghị ịhụ ya anya ọzọ, ha na-eyi m egwu ịkpọchi m ma ọ bụ ziga m na nzuzo, ma ọ bụ site na nhịahụ na ọ bụrụ na m pụọ nnenne ga aria oria na ihe obula.o g’abia
Maka nke a, anyị zochiri mmekọrịta anyị na nzuzo
Jọ na-atụ m maka na ha chọrọ inyocha ekwentị m kwa ụbọchị, ozi Facebook m, ihe niile iji hụ ma m gwara ya okwu ma ọ bụ na anaghị m agwa ya
Agwawo m ha otu puku ugboro, agbalịrị m ihe niile m nwere ndidi n'ihi na ha bụ nne na nna, ama m na ha na-echegbu onwe ha mana enweghị ihe kpatara ha ga-eji dị ka
Amaghị m ihe m ga - eme agaghị m enwe ike ọzọ
Achọrọ m naanị na ha ghọtara na ha enweghị ike ịhọrọ ndụ m
Ebe ọ bụ na ha chọdịrị ịmanye m ịlụ onye ọzọ
Ahụrụ m onye m hụrụ n'anya n'anya, ejiri m n'aka ihe m chọrọ ime
Ma, ụjọ na-atụ m na ndị mụrụ m ga-eme ya ihe
Echelarị m echiche banyere ịhapụ ụlọ m ma binye ya na ụlọ mana ana m atụ ụjọ mmeghachi omume ya
Ndewo, abụrụ m afọ iri anọ na isii, abụ m nwanyị wee gaa binyere enyi m nwoke nke ndị ezinụlọ m achọghị ma ọlị, naanị m nọrọ ya otu izu n'ihi na ọ na-esiri m ike ịga ụlọ m hụ na onye ọ bụla na-ele m anya ebe ọ bụ na ha dabere na ego m na eziokwu m nwere obi ọjọọ kama inwe obi ụtọ na onye m hụrụ n'anya
Echere m na agbaghara m n'ụlọ
Ihe kacha amasị m bụ na afọ iri anọ na isii m enweghị ntụkwasị obi ma hapụ m ka ndị ọzọ na-achịkwa m
Ndewo, abụrụ m afọ iri na asaa, kemgbe m na nwanne nne m bikọtara, nne na nna m ekewaala maka otu afọ m nwetagoro, ndụ m adịtụ ntakịrị kemgbe m dị obere, nna m nyere m ihe ọ ga - emeli na mgbe ọmụmụ m na ihe m, mana mụ na ya ebighi, anyị enwetabeghị ntụkwasị obi ahụ site na nwa nwanyị rue nna, enweela mmekọrịta mmekọrịta ịhụnanya n'etiti mụ na ụmụ nwoke nke naanị nne m maara, mana dịka m kwuru na mbụ, Ebila m na nna m, maka na ọ maghị, ọnwa isii gara aga, ezutere m otu nwa okorobịa onye agbata obi m ma ọ gbara afọ iri atọ na asatọ, anyị na ya na-akpa kemgbe ọnwa ise ma anyị anaghị emekọrịta nke ọma. , o nwere umuaka 17 na abuo abuola ndi tozuru iwu ma nke ntà bu afo iri, ma ha adighi ebi ya. Ọ bi naanị ya, m na-agwa ya na m hụrụ ya n'anya nke ukwuu yana m hụkwara ya n'anya, ọ na-asọpụrụ m, ọ na-agwa m na ọ chọrọ ihe dị m mkpa, na m nwere ike ịga n'ihu ọmụmụ m na ọrụ m, ọ tụụrụ m aro. ịtọlite ​​azụmahịa nke m, yana, ọ bụ nwoke dị egwu, mana enwere nsogbu na nwanne mama m enweghị mmasị na m hụrụ ụmụ okorobịa buru oke ibu n'anya, ma nna m pere mpe ma abụ m nke ya Naanị nwa nwanyị, ọ na-ewute nke ukwuu n'ihe gbasara nwa nwoke, mana gịnị ka m ga - eme? ọ bụrụ na m hụrụ m n'anya nke ukwuu achọghị m ịga n'ihu na-ezobe ịhụnanya m yana ọ nọnyeghị m maka ntorobịa m ma mụ na ya Anyi nọkọrịị n'ihi na anyị hụrụ onwe anyị n'anya ma mgbe anyị nọkọtara ị na-enwe mmetụta nke mmụọ nke ịhụnanya, kedụ ihe m ga-eme?
Alejandra Cedillo Gomez dijo
Enwere m mmasị ịmara otu m ga-esi nyere nne m aka, ọ nwere mmasị na ịnabataghị onye ọlụlụ m yana m na-ajụ ya maka ihe kpatara ya, naanị ihe anyị nwetara bụ na ọ chọghị n'ihi mgbakwunye na ọ bụghị maka ihe ọzọ .
Ọ na-ewute m n'ihi na achọrọ m ịdị mma na ya na ụmụnne m, yana onye mụ na ya (onye m ga-alụ n'oge na-adịghị anya).
Zaghachi Alejandra Cedillo Gomez
Ndewo, a bụ m Vicky, mụ na onye òtù ọlụlụ m nọ na-aga n’ihu n’oge ọjọọ, adị m afọ iri na itoolu, onye mụ na ya bi dị afọ iri abụọ, mụ na nne nne m na nwanne nne m nke nwanyị bi, nne nne m anabataghị nke m onye ozo m huru ya n'anya site n'ike m dum, ebe m na-ebe akwa kemgbe ihe ndia. Amaghi m ihe m ga eme, onye m na ya no bu ezigbo nwa nwoke, o di nwayo ma di umeala, nne nne m manyere m ka m soro ndi mmadu. ma mee ihe ndi m choghi ime na nke na-ewute m n’ime ya na achoro m ida enyi m nwoke n’ihi na m huru na ya onwe ya na achotala ya ike, ogaghi acho inwe nsogbu ma kedu ihe m ga-eme ? Achọrọ m ịnọnyere onye ị nwere. Anyị na-ahụ ibe anyị na nzuzo mana ọ chọrọ ịnọnyere m oge niile na enweghị m ike n'ihi na ha hapụrụ m ka m nwee nne nne m na nke m Ha ekpebiela na ha achọghị ịmatakwu banyere ya mana m na-anwụ n'ime
Nke a kpatara m ji chọọ enyemaka gị, kedụ ihe m ga-eme biko?
Nke a bụ ihe m Instagram victoriafenty_ bụrụ na enweghị m ike ịza site na mail
Achọrọ m ndụmọdụ ngwa ngwa, enweghị m ike ibi ụdị ndụ a ọzọ, pliss.
Carmelo Gallego Garces dijo
Oge ụfọdụ, anyị ga-ege ndi ezi-na-ụlọ anyị ntị, ihe isi ike anaghị ekwe ka anyị hụ ihe dị adị
Zaghachi na Garmelo Gallego Garces
M, mụ na onye òtù ọlụlụ m agwụchaala, abụ m Spanish, ọ bụ onye Mexico. Anyị alụọla ọnwa abụọ. Achọpụtara m na tupu mụ na ya enwee mmekọrịta ọkaiwu nke kewapụrụ ya na di ya, mmekọrịta nke afọ 8, n'oge nke nwunye m egosighi onye ọkaiwu ya nwoke na ezinụlọ ya, enweghị m anyaụfụ na nlọghachi, ee, m ezi uche; Na afọ 8 e kwesịrị inwe mmekọrịta chiri anya na ezinụlọ ya, ọ bụghị n'ihi na mmekọrịta ya na onye ọka iwu malitere nke ọma; naanị ya gbara ya alụkwaghịm ka ọ kpọga ya ngwa ngwa na igwefoto, .. na-enweghị ịga ikike ikike akụ na ụba ndị ọzọ, ha ebikọtabeghị ọnụ ma ọ bụ na ọ ga-erute ya n'oge afọ 8 na n'ikpeazụ ọ kwụsịrị mmekọrịta ahụ n'ihi na ọ na-ekwesịghị ntụkwasị obi na ex- nwunye,… n'oge 8 afọ e nwunye m ghọgburu? Ndị nne na nna na ụmụnne nwunye m dọrọ ya aka na ntị gbasara enweghị nghọta na mmekọrịta ahụ na enyi nwoke ọka iwu, onye yiri ka ahapụbeghị nwunye ya mbụ… Mgbe ụfọdụ ezinụlọ ziri ezi. Ma ọ bụrụ na enyi nwoke ahụ egosighi ndị ezinụlọ ya, ọ bụ n'ihi na ọ maara na ọ bụghị naanị ya ga-ekwupụta ya. Ọ kpọbatara m ndị ezinụlọ ya ozugbo. Enyere m ya bọl, dị ka ha na-ekwu maka Mexico.
juanita gomez dijo
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na ezinaụlọ m machibidoro m ndị enyi m ikpe ndị enyi m n’amaghị ha maka ọnọdụ mmekọrịta ha?
Zaghachi juanita gomez
Jennifer Lawrence sitere n'ike mmụọ nsọ etemeete